Guusha degmada Buur-Hakaba ee tartankii adkaa ee Ramadaanka -
Home News Guusha degmada Buur-Hakaba ee tartankii adkaa ee Ramadaanka
Maxaad ka taqaan Tariikhda Buurhakaba: Buur-hakaba waa magaalo qaadiimi ah oo ku taallo Gobolka Baay, waana magaalada labaad ee ugu weyn Gobolka Baay marka laga reebo Baydhowa, isla markaasna waa magaalada ugu taariikhda dheer ee gobalka.
Buur-hakaba waxay 60km dhanka Koonfur-bari ka soo xigtaa magaalada Baydhowa, waxayna 180km dhanka Waqooyi -galbeed kaga beegan tahay caasimada Muqdisho. Degmada waxay ka kooban tahay xaafadahan kala ah: Waaberi, Wadajir & Hawlwadaag, Daarusalaam waxaana hoos yimaada in kabada 400 oo tuulo qaar koodna ah magaalooyin waaweyn una qalma inay noqdaan degmooyin.
Degmada Buur-hakaba waa Guuleystaha tartan aqooneedka heerka-qaran, oo ay wada taaba geliyaan Telefishinka Qaranka & Raadiyowga Muqdisho sanad walba bisha Ramadaan. Sanad kaan aynu ku jirno ee 2020 waxaa wacdaro ka dhigay tartarnkaas heerka – qaran dhalinyarada degmada Buur-hakaba ee gobolka baay. Bal aan milicsano halganka D/Buur-hakaba ee dhanka waxbarashada.
Sidee Aheyd Waxbarashada Degmada Buur –Hakab
Degmada Buur-hakaba waa degmo caan ku ah waxbarashada waxaana wax kusoo bartay aqoonyahano magac iyo sumcad ku leh umadda Soomaaliyeed dhexdooda waxaana laga xusikaraa Sheekha weyn ee Soomaaliyeed Sh.Maxamed Macalin, Barafasoor Jawaari iyo aqoon yahano kale.
Buur-hakaba waxay nasiib uheshay burburkii ka hor in ay noqoto magaalooyinkii ugu horeeyey ee laga furo iskuulo, inkastoo ka hor 1979 Buur-Hakaba aysan helin wax dugsi sare ah ardaydana marka ay ka baxaan dugsiga dhexe ay waxbarasho sare u doonan jireen magalooyinka kale sida Muqdisho ama Baydhowa, & Marka.
Gudoomiyihii Degmada xilligaas Md. Abdi Salaad (Afdheere), ayaa xaqiijiyey ina degmada baa hidaas ka gudubto waxaana la furay Dugsigii sare ee ugu horeeyay “Sheekh Muumin” 1979 kii. Dufcadiisii ugu horeysayna waxa ay ka qalinjabisay sanadkii 1983 waxaana ka mid ahaa: Cabdirasaaq Sh. Madoobe, Cumar Guudow Jaamac , Jamaal Qaasim, Qamar Qaasim, Cumar Sh. Madoobe, Ibraahim Sh. Amiin ( Barakaale ), Cabdirashiid Ibraahim Riroorow, Cabdiraxmaan Codka, Falis Warmooge, Xaawo Cabdirahmaan, Joon cartan dhoore, Muxiyadiin Cumar Cabdiraxmaan (Madde). Iskuulka Sheekh muumin ilaa 1990 kii waxaa uu soo saaray 8 Dufcadood.
Waxbarashada Degmada Buur –Hakaba
Markii ay burburtay dowladdii dhexe waxbarshada degmada Buur-hakaba ayaa hakad ku yimid, si lamid ah degmooyinka kale ee Soomaaliya.
Sikastaba ha ahaatee; sanadkii 1992-dii ayaa mar kale waxbarsho ay dib uga billaabatay D/Buur-hakaba, kaddib markii koox dhalliyaro ay ka fureen Degmada dugsigii agoonta Buur-hakaba oo illaa haddeertaan jira.
1998-dii waxaa suura gashay in degmada laga furo Dugsi hoose & dhexe wuxuuna fursad siiyay ardayda aan aheyn agoonta in ay ka helaan degmada waxbarasho. Sanadkii 2000 waxaa dib loo furay dugsigii Hoose & dhexe ee Hakaba, kaas oo lagu suurta galiyey dadaalo uu hormuud ka ahaa Musdhaf cabdiraxmaan (Adeerow), kadib waxaa la furay Iskuulka Imam-Shaafici 2001-dii, Iskuulka Dr. Ayuub Sheekh Yarow 2004-tii iyo Iskuulka Albushraa 2009-kii.
Halgan dheer kadib Buur-hakaba waxa ay yeelatay 5 dugsi sare, iyo 6 kale oo ah dugsiyo hoose iyo dhexe, waxaa sidoo kale degmada kajira midow ay leeyihiin dugsiyada deegaanka, Ardayda guud ahaan fadhisa dugsiyada ayaa ah 3,306 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho, dugsiga sare waxaa fadhiya 527 arday, halka 2,779 arday dhigtaan dugsiyada hoose iyo dhexe, degmada sanadkaan waxaa ka qalinjabin doona dugsiyada sare 97 arday, waxaana u soo gudbi doona heerka dugsiga sare 360 arday.
GUUSHA TARTANKII ADKAA EE RAMADAANKA
Buur-hakaba waxay Tartan adag la soo gashay degmooyin waaweyn oo dalka ka tirsan, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Boosaaso, Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Wardhiigley iyo Dherkenley. Ugu danbeytii waxaa Dhammaadka isugu yimid Dherkenley oo muujisay dadaal badan, guushase Buur-hakaba ayey raacday.
Guushii tartanka SNTV & Radio Muqdisho waxaa ay ku suuro gashay dhabar adeyga ay muujiyeen aqoon yahanada Buur-hakaba ku matalayey tartanka oo ku dadaalay in ay guul hiigsadaan si ay kor ugu qaadaan sumcadda degmadooda, wacdare ayeyna ka dhigeen tartanka.
BAAHIYAHA WAXBARASHO EE KAJIRA DEGMADA
Jaamacado wax lagu baro ardayda ka soo baxeysa Dusgiyada sare
Machadyo tababarada Farsamooyinka lagu baro ardayda xirfadlayaasha ah
Machadyo caafimaad, kaas oo lagu tababari karo Kaalkaalisooyinka, Umulisooyinka iyo shaqaalaha Fayadhawrka.
Waxaa mahad celin gaar ah inaga mudan dhammaan intii dhiirrigalinta tooska ah inoo sameysay taageerada noo muujisay, nagu kabtay ducada intii uu tartanka socday iyo markii uu soo xirmay, gaar ahaanna.
Madaxweynaha KoonfurGalbeed Md. C/Casiis Laftagareen
Wasiiradda Fowsiyo Maxamed Sheekh
Xildhibaanada Senetarada iyo Jaaliyadaha Reer koonfur galbeed.
Iyo dhammaan dadkii Baraha Bulshada iyo Warbaahinta inoogu muujiyey taageerada iyo Bogaadinta.
Dhammaantiin waad mahadsanidiin
MAHADCELIN GAAR AH
Waxaa mahad celin gaar ah inaga mudan wasiirad Fowsiyo Maxamed Sheekh, oo dhiiro gelin ka sokow ka jawaabtay dadaaladii aqoonyahanada deegaanka ee “Hakaba University” bilowdayna tilaabadii koowaad ee qorshaha aas-aaska Jaamacadda Hakaba kun iyo kow jeer wasiiradda wee ku mahadsantay.